Maxkamadda Qaramada Midoobey ayaa Soomaaliya u xukuntay Kenya dacwadda badda ee mudada dheer soo jiitamaysay | Somalisan.com
Home Afsomali Maxkamadda Qaramada Midoobey ayaa Soomaaliya u xukuntay Kenya dacwadda badda ee mudada...
Maxkamadda Qaramada Midoobey ayaa Soomaaliya u xukuntay Kenya dacwadda badda ee mudada dheer soo jiitamaysay
Maxkamadda ugu sarreysa Qaramada Midoobay ayaa maanta oo Talaado ah u xukuntay Soomaaliya dacwad muddo sanado ah u dhexeysay Kenya oo ku saabsaneyd soohdinta badda, go’aankaas oo sii xumeyn kara xiriirka awalba taagnaa ee u dhexeeyay dalalka dariska ah.
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) ayaa go’aamisay in Soomaaliya, ee aysan ahayn Kenya, ay maamusho inta badan saddex -xagalka biyaha ee Badweynta Hindiya oo ay Kenya madax -bannaanideeda ilaashatay tan iyo 1979. Aagga, oo cabbirkiisu dhan yahay 39,000 mayl laba jibaaran, ayaa la rumeysan yahay inay ku jiraan kaydad. shidaalka iyo gaaska oo muddo sanado ah ahaa mid xiisad ka dhex abuuray labada dal.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bayaan uu soo saaray kadib xukunka ku sheegay in dalku uu “diidan yahay gebi ahaanba” go’aanka maxkamadda, kaas oo uu saadaaliyay inuu dhaawici doono xiriirka Kenya ay la leedahay Soomaaliya xilli xiisad ay durba ka taagan tahay gobolka Geeska Afrika ee weyn.
Dimuqraadiyaddu Waxay Ku Dhintaa Mugdisho
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ee Hague December 10, 2019. (Yves Herman/Reuters)
Oktoobar 12, 2021 | La cusboonaysiiyay shalay markay ahayd 8:30 a.m. ED
Hel waayo -aragnimada buuxda Dooro qorshahaaga
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bayaan uu soo saaray kadib xukunka ku sheegay in dalku uu “diidan yahay gebi ahaanba” go’aanka maxkamadda, kaas oo uu saadaaliyay inuu dhaawici doono xiriirka Kenya ay la leedahay Soomaaliya xilli xiisad ay durba ka taagan tahay gobolka Geeska Afrika ee weyn
Dhanka kale, Soomaaliya, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa ku ammaanay ICJ inay ilaalinayso sharciga.
“Caddaaladdii ayaa adkaatay,” ayuu yiri madaxweynuhu.
Xidhiidhka sii xumaanaya ee Kenya iyo Soomaaliya oo sanadihii u dambeeyay ahaa mid aad u liita, ayaa saamayn weyn oo dhaqaale iyo amni ku yeelan kara labada dal, ayay tiri Meron Elias, oo ah cilmi-baare Geeska Afrika ka tirsan Kooxda Xasaradaha Caalamiga ah, gaar ahaan la-dagaallanka kooxda argagixisada ah ee al-Shabab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya.
Kenya ayaa qeyb weyn ka qaadatay ciidamada ka caawiya dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxda, ayuu yiri Elias. Al-Shabab, oo xiriir la leh shabakadda argagaxisada ee Al-Qaacida, ayaa si joogto ah weeraro uga geysata gudaha Soomaaliya iyo dalalka deriska la ah Soomaaliya-oo ay ku jirto Kenya.
Dimuqraadiyaddu Waxay Ku Dhintaa Mugdi
Oktoobar 12, 2021 | La cusboonaysiiyay shalay markay ahayd 8:30 a.m. EDT
Loolan awoodeed oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra’iisul wasaaraha ka hor doorashooyinka dib u dhaca, ayaa dhanka kale abuuray madhan dowladnimo oo khubaradu ka digeen inay sii dhiirran karto kooxda.
In kasta oo ay maxkamaddu go’aamisay Talaadadii, Elias wuxuu sheegay in Soomaaliya ay yeelan doonto awood fulineed oo aad u yar maxaa yeelay ma laha ciidan badeed ama ciidan. ICJ ma laha farsamooyin fulineed.
Sheekadu waxay ku socotaa xayeysiiska hoose
Sida sarkaalka sirdoonka ee Soomaaliya lagu waayay ayaa dowladda u kala jabiyay
Xukunkeeda, Garsoore Joan E. Donoghue, oo ah madaxweynaha ICJ, ayaa meesha ka saaray dooddii Kenya ee ahayd in Soomaaliya oggolaatay soohdinta badda ee ay Kenya sheegatay.
Donoghue ayaa xusay in wada xaajoodka labada dal ka hor dacwadda ICJ, oo tan iyo markaas hakad gashay, ay muujisay in khilaafka aan la xallin
Soomaaliya ayaa ka codsatay ICJ in ay go’aan ka gaarto arrintan iyada oo aan la isku haleyn karin.
Donoghue wuxuu sheegay in maxkamaddu go’aamisay in soohdintu ay si weyn ugu socoto hal xuduud dhulka Soomaaliya, iyadoo waxoogaa hagaajin ah la sameeyay, waxayna diidday mowqifka Kenya ee ah inay raacdo khadadka dambe ee xadka.
Saraakiisha Kenya ayaa ku tilmaamay dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto xakameynta biyaha lagu muransan yahay inay tahay “si sharci darro ah oo lagu qabsaday kheyraadka Kenya,” waxay diideen inay ka qeybgalaan dhageysiga maxkamadda waxayna toddobaadkii hore ka hordhaceen xukunka iyagoo sheegay in dalkooda uusan mar dambe aqoonsan doonin ICJ.
“Annagoo ah qaran madax -bannaan Kenya mar dambe laguma qaadi doono maxkamad caalami ah ama maxkamado iyada oo aan oggolaansho cad laga haysan,” ayay Twitter -ka ku soo qortay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya. “…
Arrimaha Dibadda ee Kenya
1/4 PS @ForeignOfficeKE @AmbMKamau maanta shir jaraa’id oo uu qabtay wuxuu ku muujiyay mowqifka Kenya ka hor xukunka ICJ ee kiiska ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya.
Dimuqraadiyaddu Waxay Ku Dhintaa Mugdi Adduunka Afrika Ameerika Aasiya Yurub Bariga Dhexe
Wariyeyaasha Dibadda Afrika
Donoghue wuxuu xusay in wada -xaajoodkii u dhexeeyay labada dal ka hor dacwadda ICJ, oo tan iyo markaas hakad gashay, ay muujisay in murankii aan la xallin.
Saraakiisha Kenya ayaa ku tilmaamay dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto xakameynta biyaha lagu muransan yahay inay tahay “si sharci
darro ah oo lagu qabsaday kheyraadka Kenya,” waxay diideen inay ka qeybgalaan dhageysiga maxkamadda waxayna toddobaadkii hore ka hordhaceen xukunka iyagoo sheegay in dalkooda uusan mar dambe aqoonsan doonin ICJ.
Kenya gudaheeda, waxaa jiray walaac laga qabo in dacwadda ICJ ay saameyn ku yeelato quwadaha reer Galbeedka ee doonaya inay helaan saliidda iyo gaaska Badweynta Hindiya. Soomaaliya ayaa London ku qabatay xaraash sannadkii 2019 -kii oo la xiriira baloogyo shidaal iyo gaas oo ku yaalla gobolka lagu muransan yahay, taasoo keentay in Kenya ay dib ugu yeerto safiirkeedii Muqdisho.
Macharia Munene, oo ah borofisar taariikhda iyo xiriirka caalamiga ah ka dhiga Jaamacadda Caalamiga ah ee Mareykanka ee Nairobi, ayaa yiri “ICJ waxay u muuqatay sidii maxkamad kangaroo oo kale, tan iyo bilowgiiba way qalloocday.” danaha warshadaha shidaalka iyo gaaska.
Munene wuxuu sheegay inuu ka shakisan yahay in xukunku uu saamayn badan ku yeelan doono dadka caadiga ah, iyadoo dhicitaanku u badan yahay goobaha diblomaasiyadda. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka xagga sharciga ah ayaa cabsi geliyay kalluumeysatada gobolka Lamu ee xeebta koonfur -bari Kenya, kuwaas oo sheegaya in kalluumeysigooda ugu wanaagsan lagu sameeyo aagga lagu muransan yahay.
Somo M. Somo, oo ah kalluumeysato madax ka ah qeybta maareynta xeebta ee gobolka Lamu, ayaa sheegay in uu ka walwalsan yahay xukunka uu u yeelan doono ganacsiga, iyo xiriirka ka dhexeeya Kenyaanka iyo Soomaalida oo si nabad ah ugu noolaa aaggaas qarniyo badan.
“Haddii Soomaaliya ay qaadato aagga oo ay nagu soo rogto xayiraad, bulshooyinka kalluumeysiga ee magaalada Lamu ayaa dhaawici doona kuwa ugu badan,” ayuu yiri. “Waxaan helnay dareen cabsi ah.”
Qiyaastii boqolkiiba 70 kalluumeysiga Lamu wuxuu ka yimaadaa saddex -xagalka la isku haysto, ayuu yiri Ogutu Okudo, oo ah aasaasaha fikirka Afrika2100, oo baaray saamaynta ay bulshada ku yeelan karto xukunka ICJ ee muranka.
“Waxaad u baahan tahay inaad fahanto isku -xirnaanta bulshooyinkaan iyo waxa ay tani uga dhigan tahay dadka halkii ay ka ahaan lahayd xuduudaha badda,” ayuu yiri Okudo. “Kani maahan aag ay dadku ka hadlayaan kaydka saliidda iyo gaaska.”
Previous articleNin dhowaan qaatay diinta Islaamka oo fuliyey weerarkii xalay ka dhacay dalka Norwey
Next articleXaaladihii ugu danbeeyey iyo Ahlu sunah oo gaadiid dagaal lagala goystay
Somalia’s Thorny Problems On The Horn Of Africa
Somalisan News - November 27, 2018
Qaar ka mid ah Gudoomiyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir oo isu casili.raba cumar finish dartii
Somalisan News - September 1, 2020
Xuska Siyaaradda Sheekh Yuusuf Al-Kowneyn (Aw Barkhadle
Somalisan News - December 30, 2020
Dhalinyaro Somali ah oo lagu dilay U.K